Manaraka anao ve ny mpampiasa anao? | Singapore Top Mini GPS Tracker manokana ho an'ny autisme / Autistic Kids & Dementia Anti-panahy
Ny fampiasana GPS hanaraha-maso ny mpiasanao dia fanontaniana lehibe napetraky ny maro, manontany tena isika hoe "ara-dalàna ve ny manara-maso ny mpiasantsika?", Ny fanontaniana kosa, miankina amin'ny antony maromaro. Ao anatin'ny rafitra birao, ny mpiasa dia antenaina hatrany hamaly ny mailaka avy hatrany satria izy ireo dia eo anoloan'ny solosain'izy ireo na miaraka amin'ny fitaovana findainy izay afaka mahazo mailaka. Mikasika ny maha-ara-dalàna ny teknolojia GPS sy ny fiainana manokan'ny mpiasa, ny firenena sasany dia mametraka izany lalàna izany ao amin'ny lalàm-pananganana azy. Amin'ny tranga tsy iadian-kevitra, ny mpampiasa dia afaka manadihady ny lalàna momba ny raharaha fa na izany aza dia tsy ampy izany.
Misy antony roa mahatonga ny mpampiasa te-hanara-maso ny mpiasa ao aminy, mety ho tafiditra amin'izany ny faniriana hahalala raha miasa ny mpiasa rehefa miteny izy ireo fa miasa. Ao amin'ny indostrian'ny fitaterana izay ampiasain'ny fiara ho an'ny asa andavanandro. Ny GPS dia afaka manampy amin'ny alàlan'ny fanamoriana mpamily ary hanampy azy ireo hitarika azy ireo amin'ny toerana misy azy ireo. Ao amin'ny indostria izay mitaky ny fitaterana sy ny fifandraisana toy ny E-fitaterana toy ny Uber, Lyft ary Taxify. Matetika ny mila GPS raha te hahafantatra hoe akaiky ny tranonkala izay ilain'izy ireo ny mpiasa.
Matetika adidy sy amin'ny adidy
Indraindray ireo mpanamory GPS dia apetraka amin'ny mpiasa mba hahalala raha miasa mandritra ny fotoana iasan'izy ireo izy ireo, tsy olana matetika izany satria ny fifanarahana dia matetika, ny mpiasa dia mazàna mahalala ny zava-misy napetraka ny tracker iray. aminy / izy. Izany dia mazàna ho an'ny fanombanana hahafantatra sy hanara-maso ny asany na ny fahafantarana izany na miasa fotsiny izy ireo na hampitsahatra fotsiny ny asa dia ahafahana mahafantatra ny fotoana hijanonana ny asa. Mandritra ny adidy dia andrasana amin'ny toerana hiasana ianao ary tsy miala rehefa avela hiala fahazoan-dàlana ianao ary raha vao nekena dia tsy misy olana na inona na inona. Ny teknolojia geolocation dia ampiasaina ho an'ny tanjona roa, mety ho:
mifanaraka amin'ny sakafo sy fitsaharana fitsaharana
fanarenana ny fiara mandeha amin'ny halatra
fitadiavana ilay fiara amin'ny fotoana maika tahaka ny lozam-pifamoivoizana
mandinika ny fahombiazan'ny mpiasa
Na eo aza ny adidy, tena tsy mety ary tsy manara-penitra ny fiainana manokana momba ny fanaraha-maso ny mpiasa. Na inona na inona ataony na ataon'izy ireo amin'ny ora fiasana any ivelany dia tsy tokony ho ao anatin'ny orinasa atahoran'ny orinasa, nisy ny raharaha tsy maintsy nitakian'ny mpiasa ny mpampiasa azy noho ny fitsikilovana azy ireo raha tsy eo am-piasana. Ny olon-drehetra dia manan-jo hiaina sy avela hiditra ao na hanao izay tiany. Olana lehibe ny fanitsakitsahana ny tsiambaratelo ary afaka manintona sazy fitsarana lehibe raha toa ka misy mpampiasa meloka ho toy izany, takiana mpiasa hahalala ny momba ireo trackers GPS ary manaiky ny mety ho entin'ny orinasa. Tokony ampahafantarina ny mpiasa fa tsy mitovy ny fiainana any an-trano sy any am-piasana, izany dia miankina amin'ny zavatra rehetra ataon'ny orinasa.
Nahoana ny mpampiasa no manara-maso ny mpiasa?
Tsy vaovao izao fa ny mpampiasa dia manara-maso ny mpiasany, raha ny marina, dia lasa fanao mahazatra amin'ny sehatra io. Mazava ho azy, ny mpampiasa rehetra dia mety ho liana foana amin'ny zava-mitranga eo amin'ny orinasan-dry zareo sy ny zavatra ataon'ny mpiasany, tazomin'izy ireo foana ny fitaovany. Mety ho van na sipa finday navoakan'ny mpampiasa azy io, arahin'izy ireo mba hahazoana antoka fa miditra ny mpiasa ary miala ara-potoana ao. Ny mpampiasa sasany dia te-hahafantatra hoe ny mpiasa dia mitatitra ny fihetsiny amin'izy ireo, fa tsy mandeha anelanelan'ny ora fiasana mba hamita ny raharaha any an-tranony. Tombontsoa sasany amin'ny fanaraha-maso ireo mpiasa:
fahazoana lalana ananan'ireo mpiasa finday indrindra fa ny mpiasa amin'ny fandefasana
Ny fikojakojana ny fitsipiky ny fiarovana dia mifamatotra amin'ny alàlan'ny fiantohana ny fitsipiky ny fiarovana ny làlan-kaleha ohatra ohatra ny famotehana haingana sy famoretana tsy misy fotony
Ny fanaraha-maso ny fotoana lanin'ny mpampiasa any am-piasana sy ny fampitahana azy amin'ny karatry ny fotoana sy ny firaketany.
Ireo mpamily tsy hita dia azo arahana ary hita amin'ny teknolojia GPS.
Saingy alohan'ny hanombohanao io dingana fanaraha-maso io dia tsara ny manamarika sy hiantohana ny tsy fanitsakitsahana ny tsiambaratelo na ny fandikan-dalàna ary efa nalamina ny adidy ara-dalàna rehetra. Tokony hiantoka ihany koa ny mpiasa fa tsy manitsakitsaka ny fahatokisan'ny mpampiasa azy izy ireo.
Ny fahazoana antony mifanaraka hanaraha-maso ireo mpiasa
Alohan'ny hanapahanao manara-maso ny mpiasa sy ny asany dia tsy maintsy miatrika antony tsara afaka mijoro ary mitombina ianao. Raha tsy izany, mety hino ny mpiasanao fa ianao dia manitsakitsaka ny fiainany manokana satria tsy misy antony azo tsapain-tanana. Ireto misy antony mahafa-po:
Mampitombo ny fahombiazan'ny làlana amin'ny dia
Manatsara ny fotoana hamaly ny mpiasan'ny mpanjifa
Ampitomboy ny vokatra amin'ny ankapobeny
Jereo hoe aiza ho aiza ny mpiasa no manendry azy ireo amin'ny faritra na asa manokana
Mba hisorohana ny fahaverezan'ny ora fiasana
Ny firenena sasany dia mamela ny fametrahana tracker ao amin'ny fitaovan'ny orinasa toy ny telefaona finday, solosaina finday, takelaka, ary na dia ny fiara fotsiny aza mba hahalala fotsiny dia atao ary manara-maso amin'ny fotoan'ny halatra. Zava-dehibe ny fampahafantarana ny mpiasa amin'ny tracker mba hangarahara sy hiantohana ny valiny haingana amin'ny fanamby apetraky ny mpiasa. Zava-dehibe tokoa ny fanekena ary tsy tokony hodian-tsy hita, ny lalànan'ny firenena dia miresaka izany ao amin'ny lalàny. Raha te hanaraka ny mpiasanao ianao dia tokony mandritra ny vanim-potoanan'ny asa araka ny voalaza tetsy aloha.
Ny fanaovan-javatra lehibe amin'ny fanaraha-maso GPS
Azonao atao ny manara-maso ny mpiasa hampitombo ny fahombiazana, miantoka ny fanarahan-dalàna momba ny fiarovana na ho an'ny fanadihadiana ataon'ny mpiasa rehefa tsy tanterahany ny tanjon'ny fifanarahana. Ity fomba fanao manaraka ity dia tsara ho fantatra:
Ny fahalalana tsara ny lalàna ao amin'ny faritra na firenenao dia manaja ihany koa ny fiainana manokana rehefa manaraka ny fepetra takian'ny lalàna
Ny fanaraha-maso ny GPS dia tokony hatao amin'ny fananan'ny orinasa fa tsy fananana manokana, dia afaka manomboka fitarainana ara-dalàna.
Ny mpiasa dia tokony hofantarina fotsiny ihany amin'ny fetran'ny fepetra takian'ny orinasa. Tsy misy ny fanaraha-maso samirery na manokana.
Ny fananana fifanarahana nosoniavina sy voasoratra mazava milaza ny fomba fanaraha-maso sy ny fetrany.
Mandinika tsara ary tompon'andraikitra amin'ny angon-drakitra.
Ho fehiny, satria misy antony marim-pototra iray mety maniry ny hanara-maso ny mpiasany ny orinasa iray dia tokony hatao ao anaty fehezan-dalàna sy fifanarahana. Ity fanaraha-maso ity dia tsy tokony hanitsakitsaka ny fiainana manokana an'ny mpiasa voakasik'izany.
5501 Total Views 11 Views Today